प्रत्येक दिन मेरो इनबक्स स्प्यामिंग एसईओ कम्पनीहरूसँग आक्रोशित छ जो मेरो सामग्रीमा लिंकहरू राख्न भिक्षा गर्दै छन्। यो अनुरोधहरूको अन्तहीन प्रवाह हो र यसले मलाई चिढचिढ्छ। यहाँ कसरी ईमेल सामान्य रूपमा जान्छ ...
मैले याद गरे कि तपाईले यो कीवर्ड लेख गर्नुभयो। हामीले यसमा विस्तृत लेख पनि लेख्यौं। मलाई लाग्छ कि यसले तपाईंको लेखमा ठूलो थप बनाउनेछ। कृपया मलाई थाहा दिनुहोस् यदि तपाईं हाम्रो लेखलाई लिंकमा सन्दर्भ गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भने।
पहिले, तिनीहरूले सँधै लेख लेख्छन् यदि उनीहरूले मलाई मद्दत गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् र मेरो सामग्री सुधार गर्न सक्दछु जब म ठ्याक्कै जान्दछु उनीहरू के गर्न खोज्दैछन् ... स्थान राख्नुहोस् backlink। जबकि खोज इन्जिनहरूले सामग्रीको आधारमा तपाईंको पृष्ठहरू ठीकसँग अनुक्रमणिका गर्दछन्, ती पृष्ठहरू प्रासंगिक, उच्च-गुणहरूको साइटहरूको संख्यामा क्रमबद्ध हुनेछ जुन उनीहरूसँग लिंक हुन्छ।
अब, जब खोज ईन्जिन क्रोलरले मेरो पृष्ठ क्रल गर्दछ, मेरो सामग्री अनुक्रमणिका गर्छ, र स्रोतहरूलाई फिर्ता प्राधिकरण प्रदान गर्न ब्याकलिks्क निर्धारण गर्दछ ... यसले उपेक्षा गर्दछ nofollow लिंकहरू। जहाँसम्म, मैले लेखेको सामग्री भित्र गन्तव्य पृष्ठमा लिंक गरेको भए, ती एch्कर ट्यागहरूको nofollow विशेषता छैन। ती भनिन्छ Dofollow लिंकहरू। पूर्वनिर्धारितद्वारा, प्रत्येक लि्क रैंकिंग अधिकार पास गर्दछ जबसम्म rel विशेषता थपिएको हुँदैन, र लिंकको गुणवत्ता निर्धारित हुँदैन।
गुगलले यसको एल्गोरिदमलाई सुधार गर्‍यो साइटहरूको श्रेणी निगरानी गर्न जुनसँग ब्याकलिंकहरू स .्कलन गरियो प्रासंगिक, आधिकारिक डोमेन। त्यसोभए, हैन ... कतै लिंकहरू थप्नाले तपाईंलाई मद्दत गर्दैन। अत्यधिक प्रासंगिक र आधिकारिक साइटहरूमा ब्याकलिlin्कहरू जुटाउन तपाईंलाई मद्दत गर्दछ। एकदम विपरित, लि spam्क स्प्यामिंगले तपाईंको रैंक गर्ने क्षमतालाई चोट पुर्‍याउने छ किनकि गुगलको खुफिया जानकारीले पनि हेरफेर गर्न सक्दछ र यसको लागि तपाईंलाई दंड दिन्छ।
जब व्यक्तिहरूले मलाई लेख सबमिट गर्छन्, म प्राय: उनीहरूको एch्कर पाठ भित्र अत्यधिक स्पष्ट कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गरेको देख्छु। म साच्चै विश्वास गर्दिन कि गुगलको एल्गोरिदम यति हास्यास्पद छन् कि तपाईको लिंक भित्र रहेको पाठ मात्र कुञ्जी शब्द हो। यदि गुगलले लिंकको वरिपरि प्रासंगिक सामग्रीको विश्लेषण गर्‍यो भने म छक्क पर्दिन। मलाई लाग्दैन कि तपाईंलाई आफ्ना लिंकहरूसँग स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। जब श doubt्का लाग्छ, म मेरा ग्राहकहरुलाई सिफारिस गर्दछु पाठकको लागि के उत्तम छ। किन म बटनहरू प्रयोग गर्दछु जब म साँच्चिकै व्यक्तिहरू आउटबाउन्ड लिंक हेर्न र क्लिक गर्न चाहन्छन्।
कुनै लिंकहरू हेरफेर गर्न को लागी PageRank वा गुगल खोजी परिणामहरूमा एक साइट र्याकिंगलाई लि scheme्क योजनाको हिस्सा र गुगलको उल्ल .्घन मान्न सकिन्छ वेबमास्टर दिशानिर्देशहरू.
गुगलले सोध्यो कि प्रायोजित लिंकहरूले यो प्रयोग गर्दछ nofollow विशेषता। यद्यपि, अब उनीहरूले यो परिमार्जन गरेका छन् र भुक्तान गरिएका लिंकहरूका लागि नयाँ प्रायोजित विशेषता छ:
जब पेजरान्क पहिलो पटक छलफल भएको थियो र ब्लगहरू दृश्यमा सारियो, टिप्पणी दिन धेरै सामान्य थियो। यसमा छलफल गर्नका लागि केन्द्रीय स्थान मात्र होइन (फेसबुक र ट्विटर अघि), यसले श्रेणी पनि पार गर्‍यो जब तपाईं आफ्नो लेखक विवरणहरू भर्नुहुन्छ र तपाईंको टिप्पणीहरूमा लिंक समावेश गर्नुभयो। टिप्पणी स्पामको जन्म भएको थियो (र अहिले सम्म पनि समस्या हो)। सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली र टिप्पणी प्रणालीहरूले टिप्पणी लेखक प्रोफाइलहरू र टिप्पणीहरूमा Nofollow लिंकहरू स्थापना गर्न पहिले लामो समय लिइन।
म आउटरीच गर्दिन ... र मसँग लगभग ११०,००० लिंकहरू छन् जुन लिंकमा फिर्ता जोडिएको छ Martech Zone। मलाई लाग्छ कि यो साइटको म लेखहरूको गुणवत्ताको प्रमाण हो। तपाईंको समय उल्लेखनीय सामग्री प्रकाशन गर्नमा खर्च गर्नुहोस् ... र ब्याकलिks्कहरू अनुसरण गर्नेछन्।
डोफोलो प्लगइन डग औंल्याउनु भएकोमा धन्यवाद। मलाई थाहा थियो कि वर्डप्रेसले टिप्पणीहरूमा लिंकहरूमा rel = "nofollow" थप्यो, र म निश्चित रूपमा तपाइँको तर्कसंग सहमत छु कि टिप्पणीहरू मध्यम भईरहेको छ, टिप्पणीहरूमा बाँकी कुनै पनि प्रासंगिक लिंकहरू उनीहरूको उधारोको योग्य छ।
सुझावको लागि धन्यवाद; मैले भर्खरै प्लग-इन स्थापना गरें (पूर्ण पीडाविहीन प्रक्रिया।)
एक साक्षात्कार मा एक टिप्पणी स्प्यामरले भने:
"गुगल, याहू र एमएसएनको पहलले" अनुसरण गर्दैन "लाई सम्मान गर्न को लागी साम र उसको मान्छेलाई हराउँछ? "मलाई लाग्दैन यसले छोटो, मध्यम वा लामो अवधिमा धेरै असर पार्नेछ।"
पूर्ण साक्षात्कार यहाँ छ:
मार्टिन, महान लेख। पछिल्लो वर्षमा उसको काम कत्ति गाह्रो भयो भनेर म अचम्ममा छु!
फेब्रुअरी १,, २०११ 24:१:2007 अपराह्न
त्यहाँ कुन लिंक छनौट गर्न को लागी मार्ग छ जुन म अनुसरण गर्न चाहन्छु (वाह, जिज्ञासु भाषा मैले बनाएको कन्स्ट्रक्ट)? कारण यो छ जब मँ क्रिप्पी जानकारीका साथ केहि क्रिप्पी साइटलाई सन्दर्भ गर्दछु, मँ यो भन्दा बढि प्रचार गर्दिन। सेन्सरशिपको रूपमा हैन (यदि म सन्दर्भमा भन्छु भने, राजनीतिक धारणा जुन मेरो आफ्नै भन्दा धेरै फरक छ, तर यदि यो राम्रोसँग स्थापित छ र राम्रोसँग राखिएको छ भने, मलाई यसलाई प्रमोट गर्नमा कुनै समस्या छैन), तर एन्ट्रोपीसँग लड्न र तल खन्ने तरिकाको रूपमा। क्र्याप्ट सामग्री।
मलाई लिंक सम्पादन गर्न म्यानुअल समस्या छैन। म प्राय: Google एनालिटिक्सलाई बाहिर जाने लिंकहरू, लिंक शीर्षकहरू र दर्शकहरूको टाईपोग्राफी ठीक गर्न टिप्पणीहरू सम्पादन गर्दछु, तर केहि हदसम्म यसलाई स्वचालित रूपमा राम्रो लाग्दैन।
पक्का, TheUg! तपाईं थप्न सक्नुहुन्छ rel = "nofollow" कुनै लिंकमा जुन तपाई Google लाई श्रेणी दिन चाहनुहुन्न। उदाहरण:
हो, तिनीहरूलाई मेटाउन कोसिस गर्नु भन्दा सजिलो हुन सक्छ। म त्यस्ता सबै प्रयोग भएको तत्त्वहरू मेरो ओपेरा नोटहरूमा राख्छु (बिटहरू, टुक्राहरू, र कोड स्निपेटहरू सबै समयमा तपाइँको ब्राउजर भित्र ठीकसँग प्रयोग गर्न सजिलो छ), त्यसैले यो वास्तवमै मेरो लागि मात्र प्रतिलिपि-पेस्ट हो।
मैले यो पाएँ तपाईंलाई सम्पर्क फारम मार्फत सम्पर्क गर्नु अघि जाँच गर्नुपर्दछ।
म डग सहमत छु। यदि तपाइँ पढ्ने र जे भए पनि प्रत्येक टिप्पणीलाई मोडरेट गर्ने समस्यामा जाँदै हुनुहुन्छ (जुन तपाइँ हुनुपर्दछ) त्यसो भए उचित लि with्कको साथ वास्तविक टिप्पणीहरूलाई पुरस्कृत गर्नु अर्थपूर्ण छ।
तपाईंले परिणामको रूपमा थप "उत्कृष्ट पोस्ट" टिप्पणीहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ, तर ती सिधा जसरी रिसायकल बिनमा जान्छन्।
स्पष्ट स्प्यामरहरूमा नामहरू जस्तै "SEO विशेषज्ञ" वा "वेब डिजाइन एटलान्टा" वा केही कुञ्जीशब्द लोड गरिएको छ। वास्तविकसँग प्राय: वास्तविक नामहरू हुन्छन् जस्तै "लिसा" वा "रोबर्ट"।
कूल कि तपाईंले पछ्याउनुहुने मुद्दामा अडान लिनुभयो। परिणाममा कुनै टिप्पणीहरू छन्? के तपाईले खोज्नु भएको परिणामहरू पाउनुभयो?
परिणामहरू मेरोलाइ त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैनन् किन कि तिनीहरू तपाईंहरू जस्तो हुनेछन्! मेरो साइट मा टिप्पणी आफ्नो गुगल रैंकिंग मा सहयोग गर्नु पर्छ।
म एक Drupal संचालित वेबसाइट चलाउँछु, त्यसैले यो rel = nofollow बिना स्थापना गर्दछ, र तपाईं यो जोड्न एक प्लगइन स्थापना गर्नु पर्छ। मँ केही समयको लागि यो कार्यको बारेमा भने छु, तर मैले महसुस गरें कि त्यसो गर्नुको एक मात्र कारण यो हो कि एउटा अन्यौल भावना हो कि मैले अन्य व्यक्तिको साइटहरूमा दिएको टिप्पणीहरूले मलाई पृष्ठ र rank्कन दिदैन, जहाँ म तिनीहरूलाई पृष्ठ रैंक दिँदैछु। मैले यसलाई यस्तै छोड्ने निर्णय गरें।
धेरै व्यक्तिहरूले उनीहरूको टिप्पणीहरूलाई मध्यम राख्छन् किन त्यसो गर्दा जसले साइटमा एक उपयोगी टिप्पणी छोड्ने समय लिनेहरूलाई दण्डित गर्दछ?
मैले मेरो साइटमा टिप्पणी गर्ने नीति थपेको छु ताकि खरानी क्षेत्रमा भएका टिप्पणीहरू मेटाउनमा मलाई कुनै नराम्रो लाग्दैन।
उदाहरण को लागी, यदि कसैले टिप्पणी छोड्छ कि "राम्रो साइट" भन्छ, म टिप्पणी मेटाउने प्रस्ताव गर्दछु, जब सम्म कि तिनीहरूले यूआरएल फिल्ड छोड्दैनन्। यस्तो नीति बिना, मलाई लिंक जाँच गर्न र साइटमा आधारित निर्णय गर्न बाध्य महसुस भयो।
केहि व्यक्तिहरू भन्छन कि पृष्ठहरू पछाडि पछी अनुगमन ट्याग मार्फत अनुक्रमित हुनेछन्। के यो सत्य हो?
हो, सबै खोजी ईन्जिनहरूले अनुसरण गर्दैनन्। यो यति मात्र हुन्छ कि गुगल, खण्डमा ठूला केटाको रूपमा, जे भए पनि। म लाइभ, सोध्नुहोस् वा याहूको बारेमा निश्चित छैन। पत्ता लगाउनको लागि केहि खुदाई लिन सक्छ।
राम्रो काम - म धेरै धेरै Nofollow हुँ।
कुनै लिंक लि be्क गरिएको हुनुपर्दछ, वा तपाईंले लि exist्क अवस्थित हुन दिनु हुँदैन। म मानिसहरुलाई चिन्छु जसले आफ्नो पोष्टहरुमा लिंकमा नफोलो थप्दछन् ताकि उनीहरुसँग एक टन आउटबाउन्ड लिंक नहुने, यो सिद्धान्तको साथ कि साइटहरु जो उनीहरु लिंक छन् भन्दा बाहिर लिंक गर्दछ कम पीआर प्राप्त गर्दछ।
यसले मलाई अन्त्यसम्म पुर्‍याउँदैन।
हामीले युआरटी न्यूज ब्ल्गमा त्यस्तै गरेका थियौं तर प्रयोगकर्ता परिणामहरू र खोज इञ्जिन जुसको सर्तमा सकारात्मक परिणामहरू बाहेक केही छैन। 🙂
IMO rel = "nofollow" बिल्कुल बेकार छ, यसले टिप्पणी स्प्याम रोक्दैन किनकि स्प्यामरले सफ्टवेयर प्रयोग गर्दछ। टिप्पणी स्प्यामरहरू विरुद्ध सब भन्दा राम्रो समाधान Akismet, नराम्रो व्यवहार र क्याप्चा वा मानव प्रश्नहरू जस्तै प्लगइनहरू हुन्।
हो? ती मूर्ख wiki? s!
यदि हामी सबैले उनीहरूलाई नफोलो प्रयोग गर्छौं भने के हुन्छ होला?
नमस्कार, म सोध्न चाहन्छु कि वर्डप्रेस, याहू 360 XNUMX०, ब्ल्गर, आदि। ब्लग पोष्टहरूमा "nofollow" प्रयोग गर्दछन्। अर्थात् यदि मैले मेरो ब्लगमा पोष्ट लेखें र यसमा लिंक राखें भने के मेरो पोष्टको लिंक rel = nofollow मा परिवर्तन हुन्छ?
अगस्ट,, २०१62007:२१ अपराह्न
कुनै अनुसरण विशेषताको बारेमा उत्कृष्ट लेखको लागि धेरै धेरै धन्यबाद। किनकि यो वर्डप्रेसमा पूर्वनिर्धारितको रूपमा स्थापित छ, मलाई शंका छ कि धेरै व्यक्तिहरू यो पनि छ भनेर जान्दैनन्।
मलाई लाग्छ कि या त सबैलाई डाउनग्रेड गर्नुको सट्टा व्यक्तिगत आधारमा टिप्पणीहरूलाई अनुमति दिने वा अस्वीकार गर्ने नीति त्योभन्दा उत्तम दृष्टिकोण हो।
अगस्ट,, २०१ 15 2007:२१ अपराह्न
यस पोष्ट को लागी धन्यवाद! मलाई थाहा छ म यसलाई फेला पार्नमा ढिला भएँ, तर मैले भर्खरै ब्लग गर्न शुरू गरें र हेक्टर वर्डप्रेसले किन मेरो लिंकहरूमा नोफोलो राख्दैछ भनेर पत्ता लगाउन कोशिस गर्दैछु। म तपाईंको ब्लग फेला पार्न डफलो धन्यवाद मा राख्दैछु, हुनसक्छ यसले मेरो न्यूबी ब्लगमा अधिक टिप्पणीहरू र अन्तर्क्रियालाई प्रोत्साहित गर्दछ।
मलाई यकिन छैन कि यसले वास्तवमै सहभागिताको साथ कत्ति धेरै सहयोग गर्दछ। मलाई लाग्छ, तथापि, 'फेदरका चराहरू सँगै उडान गर्दछन्' ताकि तपाईं जडान गर्न र अन्य ब्लगहरूसँग भाग लिनको लागि अधिक योग्य हुनुहुन्छ जुन नोफोलो प्रयोग गर्दैन। लामो समय मा, मलाई लाग्छ कि त्यहाँ फाईदा छ।
मलाई यो मनपर्‍यो किनभने मलाई लाग्छ कि ब्लगिंगमा मेरो सफलताको धेरै कुरा तपाईको जस्तै मान्छेको सहभागितामा गरिएको छ। मैले किन सबै फाइदाहरू पाउनु पर्छ ?!
अगस्ट,, २०१ 26 2007:२१ अपराह्न
यस जानकारी डगका लागि धन्यबाद, म मेरो लिंकमा मैन्युअल रूपमा रिल ट्याग थप्दै थिएँ तर टिप्पणीको लागि यो दृष्टिकोणलाई कहिले पनि विचार गरेन। यद्यपि यसले राम्रोसँग बुझ्दछ, म यो गर्न सक्दछु किनकि मैले पहिले नै मेरो टिप्पणीहरूलाई ठूलो डिग्रीमा मध्यम गर्‍यो।
नमस्ते, मैले केहि दिन अघि डोफलो प्लगइन स्थापना गरें, र मैले मेरो लेखहरू र टिप्पणीहरूमा लिंक गरेको केही साना ब्लगहरूबाट केही धन्यवाद प्राप्त गरे।
राम्रो पहल पनि, तर केवल कडा टिप्पणी / प्रयोगकर्ता व्यवस्थापनको साथ संयोजनमा, अन्यथा ब्लगहरू स्प्याम स्रोतहरू छिटो सोच्दछन् भन्दा छिटो हुन्छ।
डिसेम्बर १, २०१ 13 2007:२:8 अपराह्न
तथापि, यो nofollow कुरा ब्लगर र कानूनी कमेन्टकर्ता दुबैको लागि वास्तवमै पीडादायी रहेको छ ... म चाहन्छु कि कोहीले एक प्लगइन सिर्जना गर्न सक्दछ जुन प्रशासकको इच्छामा nofollow सक्षम / अक्षम गर्दछ। सबै नोफोलो प्लगइनहरू मैले सबै टिप्पणीहरू र / वा कमेन्टकर्तामा नोफोलो ट्याग चिपको रूपमा प्रयोग गरें। जस्तो कि तपाईंले भन्नुभयो, केहि व्यक्तिहरू उनीहरूको प्रयोगकर्ताका टिप्पणीहरू अनुमोदन गर्न पिक्की छन्
म सहमत छु, Jessie! वर्डप्रेसले त्यो प्रतिक्रिया ठूलो र स्पष्ट पाएको छ, तर मलाई लाग्छ कि ती विकल्पहरू नलगाउन खोज इन्जिनहरूले उनीहरूलाई दबाब दिन सक्छन।
हास्यास्पद कुरा डग त्यो हो कि धेरै जसो "वकिल" nofollow आफ्नो साइटहरु / ब्लगहरुमा nofollow एट्रिब छ…। के यो हास्यास्पद छैन कि मानिसहरूले केहि भन्न र अर्को गर्छन्? तपाईले मेरो ब्लगमा जस्तै डोफोलो प्राप्त गरेकोमा मेरो प्रशंसा भयो ... म गुगलमा मेरो पीआरलाई कसरी असर गर्दछ भन्ने बारे मलाई यकिन छैन।
यसको व्याख्या गर्नुभएकोमा धन्यबाद। म भर्खर एउटा वेबसाइट सुरू गर्दैछु, र सबै ब्लग विकल्पहरूमा हेर्दै छु। दुर्भाग्यवश डिब्बाबंद ब्लग सफ्टवेयर जुन म आफ्नो साइटको साथ प्रयोग गर्न सक्दछु बरफ मा बदबू आउँछ, र म WordPress प्रयोग गर्ने सोच्दै छु, त्यसैले अनुसरणको बारेमा वा कुनै अनुगमन मुद्दाको बारेमा कुरा गर्दा धन्यवाद। मसँग २ वेबसाइटहरू छन्, एउटा गुगल फिर्ता लि links्क नभएको, र अर्को दिन मेरो दोस्रो साइटले नीलो बाहिरी १० गूगल ब्याकलिlin्क देखायो, र म वास्तवमै उत्साहित थिए! मैले सँधै ब्लगमा पोष्ट गरें र मलाई थाहा थिएन कि तपाईं त्यस तरिकाले लि get्क पाउन सक्नुहुन्छ, (डुह, नौसिखिया!) र अचानक मेरो १० दावद मिराकलबाट लिंकहरू थिए - जो हेकमा ऊ हो ???? मैले लिंकलाई उसको साइटमा फिर्ता पारे र मैले महसुस गरे कि यो मैले पोस्ट गरेको धेरै धेरै ब्लगमध्ये एउटा हो, धन्यवाद चमत्कार, यो आश्चर्यकर्म थियो !!! त्यसोभए मलाई यो लाग्यो कि यो कसरी भयो, र किन यो पहिले भएको थिएन! त्यसैले अब मैले बुझें। जब म मेरो ब्लग सफ्टवेयर प्राप्त गर्छु म निश्चित रूपमा अनुसरण गर्दछु, अनुगमन प्रकार होईन। हामी सबैको लागि पर्याप्त सफलता छ ... ..